China Ball Valve ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Allway Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Ball Valve
Allway သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် China ball valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် China ball valve ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2005 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဘောလုံးအဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းနှင့် လက်ကားရောင်းချခြင်းတို့ကို စတင်ခဲ့ပြီး ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်း ၂၀ မှ ၂၀၀ နီးပါး တိုးလာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အာမခံကာလအတွင်း အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အစားထိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအရ ပိုက်လိုင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
1. သေးငယ်သော အရည်ခံနိုင်ရည်၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်သည် အဆို့ရှင်အားလုံး၏ အရည်ခံနိုင်ရည်အနည်းဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အချင်းလျှော့သည့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်၊ ၎င်း၏ အရည်ခုခံမှုမှာ အလွန်သေးငယ်သည်။
2. လျင်မြန်ပြီး အဆင်ပြေသော ခလုတ်၊ ပင်စည်သည် 90 ဒီဂရီ လှည့်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘောလုံးအဆို့ရှင်သည် အပြည့်အဝ အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေမည်ဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်စွာ အဖွင့်နှင့်ပိတ်ရန် လွယ်ကူသည်။
3. အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံ၏ ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်။ ဘောလုံးအဆို့ရှင်အများစု၏ အလုံပိတ်ကွင်းကို polytetrethylene နှင့် အခြား elastic ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အဖွင့်အပိတ်ကို သေချာစေရန် ပျော့ပျောင်းသော အလုံပိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်များ၏ တံဆိပ်ခတ်မှုစွမ်းအားသည် အလယ်အလတ်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာပါသည်။ ဖိအား။
4. ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပင်စည်တံဆိပ်။အဆို့ရှင် ပင်မကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်သောအခါ၊ ပင်စည်ထုပ်ပိုးခြင်းတံ ဆိပ်သည် ဖျက်ဆီးရန် မလွယ်ကူသလို၊ ပင်စည်၏ ပြောင်းပြန်တံဆိပ်၏ တံဆိပ်ခတ်မှု အင်အားသည် ကြားခံ၏ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာပါသည်။
5. ptfe နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် ကောင်းမွန်သော ချောဆီများပါ၀င်သောကြောင့် ဘောလုံးနှင့် ပွတ်တိုက်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် သေးငယ်သောကြောင့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ကြာရှည်သည်။
6. အဝေးထိန်းစနစ်နှင့် အလိုအလျောက် လည်ပတ်မှုရရှိရန် pneumatic၊ လျှပ်စစ်၊ ညနှင့် အခြားသော မောင်းနှင်မှု ယန္တရားများဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
7. အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်အတွင်းရှိ ချန်နယ်သည် ချောမွေ့ညင်သာပြီး အရည်ပျစ်သော အရည်များ၊ slurry နှင့် အစိုင်အခဲအမှုန်များကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
8. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ပိုက်လိုင်း၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ball valve တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သော နည်းစနစ်၊ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှု နည်းလမ်းများ ပါ၀င်ပြီး ISO9001 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေး စနစ် လက်မှတ် ရရှိထားပြီး တရုတ် နိုင်ငံအနှံ့ ကောင်းစွာ ရောင်းချ လျက်ရှိပြီး ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသည့် နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများစွာသို့ တင်ပို့လျက် ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဓာတ်ဆီဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အခြားရောင်းဝယ်ရေး။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Allway Valve ဟုခေါ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် Ball Valve သည် စျေးပေါသော ကုန်ပစ္စည်းကို ရယူလိုသူများအတွက် ရေပန်းစားပါသည်။ Quotations များနှင့် စျေးနှုန်းစာရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသော လက်ကားပစ္စည်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူရန်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ပြည်တွင်းပြည်ပမှမိတ်ဆွေများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဆအနိုင်ရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။